ကိုဗစ်ကာလမှာ အိမ်မှာနေရင်းဇက်ကြောတက်တာကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ - Hello Sayarwon
ကိုဗစ်ကာလမှာ အိမ်မှာနေရင်းဇက်ကြောတက်တာကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
Ye Myo Myat မှ ရေးသားသည်။ 25/10/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲ အမြဲ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေ၊ ဖုန်းအသုံးများတဲ့သူတွေ ဇက်ကြောတက်၊ ခါးညောင်းတာ၊ ကြွက်သားညောင်းညာကိုက်ခဲတဲ့ ပြဿနာတွေကို အမြဲလိုလို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး အိမ်မှာပဲ အမြဲနေနေရတဲ့အခါမျိုးမှာ အရင်ကထက်တောင် ပိုပြီး ဇက်ကြောတက်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားနေရတဲ့ အသံတွေ ထွက်နေရပါတယ်။
မကြာခဏ ဇက်ကြောတက်တယ်လို့ ပြောတဲ့သူတွေရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကို စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါ ဇက်ကို အောက်ဘက်သို့ အတင်းငုံ့ထားတာ၊ ခါးကို မတ်မတ်မထားဘဲ ကုန်းကွေးပြီး ထိုင်နေတာ၊ လှဲအိပ်ပြီး ဖုန်းသုံးတာ၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်တာ၊ တစ်နေရာတည်းမှာ ဘယ်မှမထဘဲ အကြာကြီးထိုင်နေတာ စတဲ့အချက်တွေကို တွေ့ရပါတယ်။
အိမ်မှာပဲ နေနေပြီး ဘယ်မှမသွားရတဲ့အခါ လူတွေက ပုံမှန်ထက် အချိန်ကြာမြင့်အောင် ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရုံးမဟုတ်တဲ့အတွက် အိမ်အလုပ်တွေပေါ်လာရင် ထလုပ်လိုက်တာ၊ အလုပ်လုပ်နေရင်း ဖုန်းသုံးလိုက်တာ၊ အင်တာနက်ကနေ စားစရာတွေကို အော်ဒါလှမ်းမှာပြီး စားနေတာ၊ အလုပ်လုပ်လိုက် အနားယူလိုက် လုပ်တာမျိုးကြောင့် ခါတိုင်း ရုံးတက်၊ ရုံးဆင်းချိန်လိုမျိုး အတိအကျမရှိတော့ဘဲ အလုပ်ချိန်တွေ ပိုကြာသွားတဲ့အတွက် ဇက်ကြောတက်တဲ့သူတွေ ပိုများလာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို မဖြစ်ရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
ခုပြောပြမယ့်နည်းလမ်းတွေက အိမ်မှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အချိန်ကာလအတွက်သာမက ရုံးပြန်တက်ရတဲ့အချိန်မှာပါ ဇက်ကြောတက်တာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် နေထိုင်မှုပုံစံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ အလုပ်လုပ်ဖို့ စားပွဲ၊ ထိုင်ခုံ သီးသန့်ထားပါ။
ကြမ်းပြင်မှာ ထိုင်ပြီး ကုန်းကုန်းကြီး အလုပ်လုပ်နေတာမျိုးက ကိုယ့်ရဲ့ ဇက်နဲ့ ခါးကို ဆက်စပ်ထားတဲ့ အရိုးအဆစ်တွေကို ညောင်းညာကိုက်ခဲစေပြီး အရိုးအဆစ်ရဲ့ အနေအထားကို ပုံစံလွဲသွားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တတ်နိုင်သလောက် အလုပ်လုပ်ဖို့သီးသန့် စားပွဲ၊ ထိုင်ခုံထားထားပြီး အဲဒီနေရာမှာပဲ အလုပ်ကို လုပ်ပေးပါ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်စေမယ့် နေရာတစ်နေရာ ဖန်တီးထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၂။ ထိုင်တဲ့ပုံစံကို အဓိက ပြင်ပါ။
ခါးကို မတ်မတ်၊ ဇက်ကြောကို အောက်အတင်းငုံ့နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တည့်တည့် သို့မဟုတ် အောက်သို့ ၂၀-၃၀ ဒီဂရီလောက်ပဲ ငုံ့ပေးရတဲ့ အနေအထားရစေဖို့ ကွန်ပျူတာ၊ ထိုင်ခုံကို အဆင်ပြေအောင် ညှိပေးပါ။ ဖုန်းသုံးနေရတယ်ဆိုရင်လည်း ခါးမတ်မတ်ထိုင်ပြီး သုံးပါ။ တစ်စောင်းလှဲ၊ ခါးကုန်းပြီး မသုံးပါနဲ့။
၃။ အလုပ်ကို အချိန်စွဲပြီး မလုပ်ပါနဲ့။
ခုလိုကာလမျိုးမှာ လူတော်တော်များများက အလုပ်ကို ဆက်တိုက်မလုပ်ဘဲ အကြာကြီးနားလိုက်၊ စားလိုက်၊ အချိန်ဆွဲလိုက်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်နဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း အလုပ်လုပ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လုံးဝမကောင်းတာတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေ မပြီးတဲ့အခါ ဒီအလုပ်ကိုပဲ အချိန်အကြာကြီး စွဲပြီးလုပ်ရတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ခါးအရိုးအဆစ်ကိုလည်း ရေရှည်မှာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
၄။ တစ်နေရာတည်းမှာ အကြာကြီးမထိုင်ပါနဲ့။
ကိုယ်က ထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုရင် နာရီဝက်ခြား တစ်ခါလောက် ထပြီး ဆီးသွားတာ၊ ရေသောက်တာ၊ ခါးကြော၊ ဇက်ကြောကို ဆန့်ပေးတာ၊ လမ်းလျှောက်တာမျိုး လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ၅ မိနစ်လောက်နားရင် လုံလောက်ပါတယ်။ ပြီးသွားမှ ကိုယ့်အလုပ်ကို အမြန်ဆက်လုပ်ပါ။
၅။ ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ပေးပါ။
ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းသည် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရိုးအကြောတွေ တင်းနေတာကို ပြေလျော့စေဖို့ ဆွဲဆန့်ပေးရတဲ့ အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပါ။ Gym တွေကလည်း မဖွင့်သေးဘူးဆိုပေမဲ့ ကိုယ့်အိမ်မှာ ရရင် ရသလို အကြောလျှော့ပေးခြင်း၊ အလေးတုံးမလိုတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ပေးခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့အရိုးအဆစ်တွေနဲ့ ကြွက်သားတွေကို အားလျော့သွားတာမျိုး မဖြစ်စေအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ယောဂမကျင့်ချင်ရင်လည်း ရိုးရိုးခြေလက်ဆန့်တန်းတာ၊ အကြောလျှော့တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပေးလို့ ရပါတယ်။
ညောင်းညာကိုက်ခဲလာတဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်ပေးလို့ ရမလဲ။
ပုံမှန်အားဖြင့် ဇက်ကြောတက်တာက ဆိုးဆိုးရွားရွား နာကျင်တဲ့ဝေဒနာမျိုး မဟုတ်ပေမဲ့ ကိုယ့်အတွက်တော့ နေထိုင်ရတာ မသက်မသာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အနေနဲ့ အိမ်ကနေ ဘယ်လိုကုသလို့ရမလဲဆိုရင်
ဇက်ကို ဘေးဘက်၊ အပေါ်၊ အောက် ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲလှည့်ပြီး အကြောဆန့်ပါ။
ဇက်နေရာတည့်တည့်ကို ရေခဲဝတ် ၅ မိနစ်ခန့် ကပ်ပေးပါ။
နာရီဝက်ခြားတစ်ခါ ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုတာကို ၅ မိနစ်ခန့် နားပေးပါ။
အရိုးအဆစ်ကို ကျန်းမာစေဖို့ နွားနို့တစ်ခွက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် ပုံမှန်သောက်ပေးပါ။
Hello ဆရာဝန် ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ ဘဝနေ့ရက်များကို ပိုင်ဆိုင်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း ဒီမှာပဲ နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
Persistent Pain in the Neck! What Resources Help you Prevent MSDs in the Workplace?
ဘယ်အရာက ဇက်ကြောတက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသလဲ
ကြွက်သားတွေ နာကျင်ကိုက်ခဲတာကို သက်သာစေဖို့
လေ့ကျင့်ခန်း စစလုပ်ချင်း ကြွက်သားနာကျင်ကိုက်ခဲတယ်ဆိုတာ